လုံခြုံမှုကိုအကောင်းဆုံးမေးခွန်းများမေးလျှပ်စစ်စကိတ်စီးကုမ္ပဏီများရှိပါသလဲ - Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
အဆိုပါစကိတ်စီး၏ Construction နှငျ့ ပတျသကျ. , သင်က၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အချို့သောရှုထောငျ့စဉ်းစားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦး၏အယူအဆကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင် လျှပ်စစ်စကိတ်စီးမူလတန်း modular လျှပ်စစ် powertrain: သော်လည်း, သင်သည်သင်၏လက်ရှိ setup ကိုကိုချစ်, သင် eon ကြည့်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါတို့ကဲ့သို့တစ်ဦးအမြန် PACE ကမ်ဘာပျေါတှငျ, အရှိန်အဟုန်နှင့်စျေးနှုန်းထိရောက်မှုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌အရေးကြီးသောအရာဒြပ်စင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပဲ။ သင်ရုံတစ်ဝက်တစ်ပျက်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်လမ်းအလယ်၌ထအားသွင်းလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်များကဲ့သို့အလျင်နှင့်ကွဲပြားခြားနား, ဒါ့အပြင်အရေးကြီးလှသည်။ သငျသညျအောက်ခြေပြိုလဲကြလျှင်သင်ပယ်ရှင်း skidding ကနေစောင့်ရှောက်ဖို့ရပ်တန့်သည်အထိထို့အပြင်, လှိမ့်။ ဒါဟာသင်ပြုလုပ်စတင်ဖို့ကရပ်တန့်နှင့်အလျင်ပြောင်းလဲနှင့်အသစ်သို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်ဖောက်သည်လိုက်လျောညီထွေနှစ်ခု Modes သာရှိပါတယ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့လက်ကိုင်ဝေးကွာသောအတူတက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဤရှုထောင့်လွန်စွာပုတတ်လွယ်ခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်သက်ရောက်မှုဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါဟာသို့သော်ကဘုံအသုံးပြုမှုများအတွက်အဆင်မပြေလည်းရှုပ်ထွေးရဲ့ off-လမ်း Adventures များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အဖော်ပါပဲ။
ဒါကြောင့်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောအနည်းငယ်လျှပ်စစ်စကိတ်စီးဘာလဲ သင်တို့သည်လည်းလျှပ်စစ်မီးအားဖြင့် run သင့်ရဲ့စကိတ်စီးနှင့်အတူတစ်ဝေးလံသောစီမံခန့်ခွဲမှုအထဲကရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Inboard လေးလံသောဘက်မှာအနည်းငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့်တစ်ဦးပုံမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, ကျင်းပရန်တကယ်မျှမျှတတ snug ခဲ့တာဝေးကွာသောဖွဲ့စည်းခဲ့သိရသည်။ အဆိုပါသုတေသနပြု 200 နာရီကြာအနီးဖြုန်းပြီးနောက် စုံလင်သောအမှတ်တံဆိပ် စျေးကွက်ပေါ်နှင့်မော်ဒယ်များကျနော်တို့စျေးကွက်အပေါ်ထိပ် 10 ပျဉ်ပြားရရှိနိုင်ညာဘက်ဒီအခိုက်ဝယ်သူတို့ကိုအကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်-by-side အမှန်တကယ်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အုပ်စိုးရသောက e-စကိတ်စီးထွက်ရှာရန်စမ်းသပ်ပြီး! ကျနော်တို့ပျဉ်ပြားအလွန်နေသောအထဲကရှာတွေ့ဖို့အများကြီးလျှပ်စစ်စကိတ်စီးအကဲဖြတ်ပြုသောအမှုဖွင့် အကောင်းဆုံးလျှပ်စစ်စကိတ် ။ လျှပ်စစ်စကိတ်စီးတဲ့စကိတ်စီးမဟုတ်ဘဲအများကြီးအသစ်တခုမြင်းစီးသူရဲများအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်အတွေ့အကြုံရှိမြင်းစီးဖို့အမှန်တကယ်ကန်ပေးပါသည်၏တစ်ဖွဲ့လုံး heck သုံးပြီးစေသည်ကြောင်းမော်တော်ပါဝင်ပစ္စည်းရှိခြင်းအားဖြင့်ပုံမှန်စကိတ်စီးကနေကွဲပြားနေသည်။ Value ကို - လက်မ၏အခြေခံစည်းမျဉ်းနှင့်အမျှလျှပ်စစ်စကိတ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုသင်တို့အဘို့အပေးဆောင်သောအရာကိုရ။
အပြုသဘော။ တကယ်တော့, လျှပ်စစ်စကိတ်နောက်ဆုံးမိုင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအခြားရွေးချယ်စရာတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ Koowheel ကိုသိ-ဘယ်လိုကုမ္ပဏီတစ်ခုကဒါပေါ်မှာအကျဉ်းအကွာအဝေးအပန်းဖြေလမ်းလျှောက်အတှကျအသုံးပွုအမွှာမော်တာနဲ့လေးဘီးလျှပ်စစ်စကိတ်စီး၏သမိုင်းမိတ်ဆက်နှင့်။ 30km / h ၏ပုံမှန်အလျင်၏သမိုင်းအတွင်းမှာပဲဘက်ထရီသက်တမ်း 20 ခန့် 25km မှဖြစ်လိမ့်မယ်။ သင်ဒီမှာအပြည့်အဝ Dynacraft လျှပ်စစ်စကိတ်စီးခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအထဲကစစျဆေးဖို့အတှကျအသငျသညျသစ်တစ်ခု pastime ကောက်သို့မဟုတ်ရုံခင်း browsing အအေးကြည့်ဖို့လိုနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်, အအေးဆုံးလျှပ်စစ်စကိတ်ကဒီမှာရှိပါတယ်။ အနှစ်ချုပ်ရန် - သင်တို့အဘို့အလို့ငှာတစ်ဦး, အမြန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလူအပေါင်းတို့သည်အလွန်အထက်တွင် အဆင်ပြေ လျှပ်စစ်စကိတ်စီး, ထို့နောက် koowheel2မျိုးဆက် kooboard သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်အဘယျသို့ဖွစျသညျ! သငျသညျကိုဝယ်မော်ဒယ်ပေါ် skimp မပြုရတစ်ခုမရှိမဖြစ်အင်္ဂါရပ်ကို pre-set ကိုစီးနင်းသည် Modes ၏ရွေးချယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး devices တွေကိုခရီးဆောင်ဖြစ်ကြပြီးနှစ်ဦးစလုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသင့်ရဲ့အဓိကအမျိုးအစားအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထံမှရရန်အသုံးပြုသွားမည်နိုင်သည့်တစ်ဦးအားပြန်သွင်းနိုင်ဘက်ထရီစွမ်းအားဖြင့်နေကြသည်။ ဒီအပြည့်အဝ longboard တည်ငြိမ်အသုံးပြုမှု 26 တစ်နာရီမိုင် (42kph) ကိုအမြန်နှုန်းတက်နှိပ်, ပျော်စရာသင့်ရဲ့ longboarding များအတွက်ထပ်မံဇစ်ကယ်နှုတ်တော်မူရန် lithium-ion ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုသည်။
ဤရွေ့ကား လျှပ်စစ်စကိတ် ကုန်ကျခြင်းနှင့်သုံးစွဲဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါမူလတန်းလျှပ်စစ်စကိတ်မူလကစက်ဘီးနှင့်ကားများကဲ့သို့တူညီသောမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်တွေ့ကြုံခံစားဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သညျ။ ဒါကြောင့်ပင်ထိုကဲ့သို့သောသာအရှိန်အဟုန်အဖြစ်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ရှုထောင်အပေါ်ပေါ်မှဘုတ်အဖွဲ့စစ်ဆေးမဟုတ်ဘဲဒုက္ခသည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားကြောင်း, အခုအချိန်မှာစျေးကွက်အပေါ်လျှပ်စစ်စကိတ်၏ထိုကဲ့သို့သောတွေအများကြီးထုတ်ရရှိနိုင်ရှိပါတယ်။ လျှပ်စစ်စကိတ်မြင်းစီးဖို့ကြီးမားတဲ့ဘဝပုံစံအားသာချက်များကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အတွေ့အကြုံကိုသို့ခရီးသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလှန်ပေလိမ့်မည်။ အမှန်ကတော့နည်းပညာအရှိဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည်ဤလျှပ်စစ်စကိတ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ ခြောက်မိုင်အစောပိုင်းသုံးခြင်းနှင့်ပရိတ်သတ်များ, ဒါမှမဟုတ်နှိုင်းယှဉ်တိုတိုသွားလာခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လုံလောက်သောအကွာအဝေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ခရီးဆောင်ရဲ့တစ်ခုခုအများကြီးလျော့နည်းအမြန်နှုန်းနှင့်အကွာအဝေးရှိခြင်းအပေါ်အလျှော့ပေးလိုက်လျောဖို့စိတ်အားထက်သန်ဖြစ်၏။
အချိန် post: မတ်လ-07-2018